Wholesale Macroporous chelation resin Mugadziri uye Mutengesi | Dongli
Dongli akasiyana-siyana ekutsenga resini ane akasarudzika mashandiro emapoka ayo anopa aya resin akasarudzika akasarudzika kune chaiwo akanangwa simbi. Chelation resin inowanikwa mune dzakasiyana siyana simbi kubviswa uye kudzoreredza kunyorera, kubva kunekutanga kupora kwesimbi yakakosha pamwe nekubvisa tsvina iyo inogona kuve iripo seyowo marara.
DL401, DL402, DL403, Dhiyabhorosi, DL406, Dhiyabhorosi, DL408, Dhiyabhorosi
Resins Chimiro chePolymer Matrix Chitarisiko Fomu Kuonekwa RinoshandaBoka Ionic Fomu Yese Shanduro Kugona meq / ml Mhepo Yemukati Particle Saizi mm Kutumira Kurema g / L
DL401 Macroporous Ploy-styrene ine DVB Opaque Spherical Mabheji Iminodiacetic Acid Na 0.8 55-65% 0.425-1.2 750
DL402 Macroporous Poly-Styrene ine DVB Yakachena Spherical Beads Aminophosphonic Na 0.9 55-65% 0.425-1.2 750
DL403 Macroporous Poly-Styrene ine DVB Opaque Spherical Mabheji Methylglucamine Mahara Base 0.9 50-60% 0.425-1.2 750
Dhiyabhorosi Macroporous Poly-Styrene ine DVB Opaque Spherical Mabheji Thioureido H 0.8 45-50% 0.425-1.2 750
DL406 Macroporous Poly-Styrene ine DVB Grey Opaque Spherical Beads Al 0.5 50-55% 0.30-1.20 750
Dhiyabhorosi Macroporous Poly-Styrene ine DVB Yakachena Spherical Beads RN (CH3)2(C2H2OH)- Cl 0.9 50-56% 0.30-1.20 700
DL408 Macroporous Poly-Styrene ine DVB Brick Tsvuku kuBrown Spherical Beads Fe (OH) 0.6 50-56% 0.30-1.20 700
Dhiyabhorosi Macroporous Poly-Styrene ine DVB Opaque Spherical Mabheji Quaternary Amoniamu Cl 0.75 40-50% 0.30-1.20 700
Pakati pese, iyo resin ine yakakwira crosslinking degree ine kusimba kusarudzika kune ions, uye iyo sarudzo ye macroporous resin yakaderera pane iya yeiyo gel mhando resin. Iko kusarudzika kwakakura mune yakasanganiswa mhinduro uye diki mune yakadzvanywa mhinduro.
Macroporous resin inogadzirwa nekuwedzera porogen mune iyo polymerization reaction kuti igadzire chimiro cheyakaomeswa chipanji dhizaini, ine huwandu hukuru hwema micropores mukati, uyezve nekuunza mapoka ekutsinhana. Hukuru uye huwandu hweiyo yakanyorova resin inogona kudzorwa panguva yekugadzira. Iyo yepamusoro nzvimbo yegero inogona kuwedzerwa kupfuura anopfuura 1000m2 / g. Izvi hazvipi chete zvinopa yakanaka yekudyidzana mamiriro ekuchinjana kweion, kupfupisa chinhambwe cheiyoni diffusion, asi zvakare inowedzera akawanda maketani anoshanda nzvimbo. Kuburikidza neiyo van der Waals simba pakati pemamorekuru, inogona kuburitsa mamorekuru kushambadzira, ayo anogona kushambadza marudzi ese ezvinhu zvisina-ionic senge yakagadziriswa kabhoni uye nekuwedzera basa rayo. Mamwe macroporous resin asina kuchinjanisa anoshanda mapoka anogona zvakare kushambadzira uye kupatsanura zvakasiyana zvinhu, senge phenols mune kemikari chirimwa mvura yakasviba.
Kana zvemunyu zvemvura mbishi zvawanda, electrodialysis, reverse osmosis uye mamwe maitiro anogona kushandiswa pre-desalination yemvura mbishi.
Iyo huni adsorption chelating resin dziva rinoumbwa nekristaro fomu uye CSP polymer zvinhu. Inonyanya kukodzera pamadziro emadziro kuti ashandiswe sekudzivirira mweya pombi, kuunganidza pombi uye yekutarisa pani mune ino system. Nekuda kweye adsorption muyero wepamusoro pemvura RF lens, mutengo wekuvaka unogona kudzikiswa, Mhedzisiro yekuvandudza kugadzirwa kwekugadzira, huni hwekugadzira system uye yekupompa sisitimu inogona kugadzirwa zvakanyatsonaka mune izvi zvinhu.
Zvakare, huni hwekunze hunopa mhando yekumanikidza kune yekumusoro kurapwa kwekupfeka, iyo isingori chete yekugadzirisa iyo adsorption mutengo uye mwando kuramba, asiwo chigadzirwa chekudzivirira kwezvakatipoteredza mukuita kwemaguta, uye yechipiri kushandiswa kwakawanda yakanaka.
Pashure: Simba risina kusimba anion exchange resin
Zvadaro: Yakasimba base anion exchange resin